Ku dhis aduunyo tan ka fiican Isbahaysiga Paxful
Kusoo dhawoow Paxful Alliance Aana isla dhisno aduunyo sidaan ka wanaagsan
Qayb ka noqo nidaam noole ah kaasoo kaa caawinaaya inaad dhisto awoodaada, aadna hesho shirkado diihaal leh oo kula wadaaga fikradahaaga si aad u kaashato. Aruuri khayraadkaaga, la wadaag higsigaaga, wada shaqeeya, oo dhisa waxyaabo waawayn oo bulshadaadu ku haminayso.
Aan wada shaqayno
Maxaad ugu biiraysaa Paxful Alliance?
Waxaan isku keenaynaa ururo iyo shaqsiyaad ka kala socda dhammaan qaybaha nolosha. Ganacsiyo, shaqsiyaad, iyo khayriyaad ayaa hadda iska kaashan kara higsiyadooda wadaaga ah iyo yoolalka ay u hayaan bulshadooda. Wax badan ayaad ka faa'iidaysaa isbahaysigaan.
Wanaag badan samee
Hel dad kula fikir ah oo gaar mabaadii'da nolosha shaqada macnaha leh ee bulshada oo aad xiisaynayso.
Ka qaybgal ol-olayaasha xariirka bulshada oo faafi fariinta ku aadan naqshadaada si ka badan sidii hore.
Fahansii dadka mabda'da oo waxbar
Bar dadka badeecooyinkaaga ama ganacsiyada adoo adeegsanaaya goobo cusub iyo safka hore ee xeer samaynta wadista shaqadaada.
Kahortag saamaynada xunxun
Si wadajir ah uga hortaga tartanka guud kana hormar. Midoowgu waa awood.
Fahan sharciyada maxaliga ah
Hel caawimaada saxda ah si aad ganacsigaaga u waafajiso sharciyada maxaliga ah ee suuqyada cusub.
Aduunyada ku faaf, gal suuqyo cusub, oo hel xarunta balaaran ee isticmaalaha oo aad ku bixiso badeecooyinkaaga ama adeegyada.
#BuiltWithBitcoin — Waa isbahaysi ka shaqaynaaya hormarka bulshada
Paxful ayaa billoowday mashruucaan deeqda ah sanadkii 2017 si loo muujiyo in Bitcoin leedahay awooda caawinta dadka aduunyada oo dhan. Waa cadaynta muhiimada lacagta oonleenka ah u leedahay aduuntada dhabta ah ayadoo laga gudbaayo kutiri-kutenta la faafiyay. Ayadoo la adeegsanaayo isbahaysigaan, waxaan ku boorinaa qaybta lacagaha oonleenka ah inay qoondo ku yeeshaan mashruucyada banii'adamnimada.
Xarumaha GROW Educare
Dugsiyada ku yaala Afrika
Anagoo kaashanayna ZamZam Water, waxaan dhamaynay dhismaha dugsi barbaarin iyo midka hoose-dhexe oo ku yaala xaafada Kasebigege, Rwanda. Sidoo kale, dhismaha xarun waxbarashada dhallaanka ah oo loo sameeyay carruurta da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 6 ayaa dhismaheedu ka socdaa Machakos County, Kenya.
Ayadoo akhrisku qayb wayn ka yahay barnaamijka Eudcare, deeqda Paxful ayaa loo adegesaday in lagu iibsho buugaag la siinaayo maktabadaha yaryar ee xarumaha kaladuwan. Deeqda ayaa sidoo kale loo adeegsaday in baakado cunto ah loo diro kumanaan qoys oo ku dhaqan Western Cape iyo gobollo kale intii lagu jiray aafada caabuqa COVID-19.
Kahortaga aafada COVID-19
Ayadoo qayb ka ah Sanduuqa #BuiltWithBitcoin’s Afrika, Shining Hope for Communities ayaa aruurisay 333 saladaha cuntada ah oo la siiyay dad ka badan 1500, in ka badan 6,000 oo maaskaro oo la siiyay shaqaalaha safka hore, biyo nadiif ahna ku keenay in ka badan 60 goobood oo lagu farxasho deegaanka Kibera muddo bil ah.
Ma kuula muuqataa wax wanaagsan, laakiin wali ma hubtid inay kugu habboon tahay? Haddii aad tahay farsamo yaqaan dhaqaale ama deeqsi. Isbahaysiga Paxful adiggaa loogu talagalay. Halkaan ayaad ka helaysaa heerarka kaladuwan oo loo sameeyay wada shaqayntaada iyo faa'iidadaada.
Gacan ka gayso waxbarista bulshada si loo baro dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee lacagta oonleenka iyo tignooloojiyada.
Baanka iyo dhaqaalaha
Kacaan ku geli caalamka dhaqaalaha fikradahaaga hal abuurka leh oo dhis badeecooyin waawayn oo hagaaya mustaqbalka lacagta.
Saxaafada iyo Xariirada Bulshada
Ku faafi fariintaada aduunka oo dhan, adoo diraaya fariinta saxda ah, si aad u gaarto meel kasta.
Suuqa lacagta oonleenka ah
Iska moos caqabadaha badan ee ganacsiga lacagta oonleenka ah, baro suuqyo cusub iyo fursado
Madadaalada iyo Ciyaarta
Hogaanka u qabo raxanka ciyaaraha iyo madalaadaha lacagta oonleenka ah. Soo noolee dhammaan fikradahaaga wanaagsan ee ciyaarta.
Wax kasta oo kale oo aad doonayso inaad iskaashi ka samayso. Marna ma ogaan doontid qofka xiisihiisa ay cajab gelinayaan fikradahaagu!
Diyaar ma u tahay lacag degdeg ah? Aan wada shaqayno